Taageero la ururiyay oo ku socota waaliddiinta iyo dadka kale ee wa...
Ma u baahantahay cid aad la hadashid oo aad kala sheekeysatid waalidnimadaada? Waxaan, adigaaga waalidka ah ama qof weyn oo muhiim u ah carruurta iyo dhallinyarada, kugu casuumeynaa wadahadal gaar kuu ah iyo kulan waalid oo digital ah.
Telefoon: 073-962 39 52, 070-515 48 61
Xarunta dhexe ee caafimaadka arday
Caafimaadka ardayda ee digitalka ah wuxuu furanyahay dhammaan maalmaha aan fasaxa ahayn, inta u dhexeysa saacadaha 07.30 iyo 17.00, waxaana lagula soo xiriiri karaa khadka intarneetka. Adeeggu xitaa wuu furanyahay maalmaha shaqada ee fasaxa iskoolka. Ardayda dooneysa sidii caadiga ahayd ayey, la taliyaha arrimaha bulshada iyo kalkaalisada caafimaadka ee iskoolka, toos ula sii xiriiri karaan ama taleefanka wadaagga ah ayey ka wici karaan.
Ardayda iyo waaliddiinta labaduba waxay la taliyaha arrimaha bulshada iyo kalkaalisada caafimaadka ee iskoolka ku heli karaan taleefanka taageerada.
Telefoon: 0176-28 34 41.
Talo iyo taageero xagga taleefanka ah
Guriga shacabka ee Norrtälje, talooyin iyo taageero ayuu khadka taleefanka kugu siinayaa adigaaga baahida u qaba maareynta welwelkaaga waqtigan adag ee lagu jiro.
Maalmaha shaqada, saacadaha: 13-21
Maalmaha fasaxa: Saacadda: 10-20
Telefoon: 0176-326 483
Qaabilaadda daryeelka furan ee carruurta, dhallinyarada 0-18 jirka ah iyo waaliddiinta taageerada ugu baahan dhibaato fudud oo xagga maskaxda ah.
Ballan ku qabso bogga 1177 ama toos u wac si aad talo u heshid, waqtina u ballansatid.
Isniin-khamiis, saacadaha: 8.00-16.30
Jimco, saacadaha: 8.00-15.00
Telefoon: 0176-326 460
Farriin waa lagu dhaafi karaa sanduuqa farriimaha ee taleefanka, si sida ugu dhakhsi badan ee suurta gal ah laguula soo xiriiro.
Nambarka talooyinka waxaa loogu tala galay dadka waaweyn ee u baahan in ay cid xigtadooda ka baxsan kala hadlaan laga billaabo dhibaatada nolosha ilaa iyo doorashada waddada nolosha, iyadoo uusan qofku u baahan in uu meel iska qoryo. Nambarka talooyinku wuu dhegeysanayaa, wuxuu gudbinayaa aqoon, wuxuu bixinayaa talooyin iyo taageero, haddii loo baahdana wuxuu qofka u sii tilmaamayaa meelo kale oo wax loogu qabto oo degmada ah.
Maalmaha caadiga ah, inta u dhexeysa saacadaha: 17.00-18.30
Qeybta dhimirka carruurta- iyo dhallinyarada, BUP, waa qeyb qaabilaad oo gaar ah oo loogu tala galay waaliddiinta leh carruur jirta ilaa iyo 17 sano. Waxaa BUP lagula xiriiri karaa iyadoo qofka meel kale laga soo gudbiyo ama iyadoo uu khad taleefanka iskula qoryo. Waxay xitaa BUP duubtay filmaan ku aaddan tusaale ahaan welwelka iyo niyad jab: https://www.tiohundra.se/bupfilm
BUP waxay leedahay hawlo qorsheysan laakiin waxay sidoo kale xaalado degdeg ah qaabishaa inta u dhexeysa saacadaha:
08.00 - 16.00 maalin kasta oo shaqo. Fiidadka iyo fasaxyada waa BUP-ta Stockholm meesha lala xiriiri karo.
Carruurta sii yar-yarna waxaa sidoo kale jira BUP nuxur ah oo wadajir u qaabilaya carruurta xannaannada ee 0-6 jirrada ah iyo waaliddiintooda.
Taleefanka BUP Norrtälje: 0176-327 380
Taleefanka BUP Stockholm: 08-616 69 00
Haddii aad ka welwelsantahay in ay canug dhibaato ku dhaceyso waa in aad la xiriirtaa xafiiska sooshaalka. Waxaad dooran kartaa in aad dacwo gudbisid ama aad talo weydiisid adigoo aan sheegin canugga ay arrintu khuseyso. Haddii aad rabtid waxaa noqon kartaa qof qarsoon.
Qaabilaadda carruurta iyo dhallinyarada
Telefoon: 0176-710 43
La xiriir heeganka sooshaalka haddii aad caawimaad u baahantihid fiidadka, habeenki iyo maalmaha fasaxa.
Telefoon 08-410 200 40
Qaabilaadda Mini Maria
Qaabilaadda Mini Maria ee Norrtälje waxaa loogu tala galay dhallinyarada qabta dhibaatada aalkoliistanimada iyo daroogada.
Telefoon: 0176-716 72
Waaxda cunfiga dadka leh xiriirka dhaw
Qaabilaadda mas’uuliyad gaar ah ayaa xaggaaga ka saaran adigaaga uu cunfi maskax ahaaneed, mid jir ahaaneed ama xadgudub uu u geystay qof aad xiriir dhaw leedihiin.
Telefoon: 0176-714 43
Isniin - Jimco 08.30-12.00.
Waqtiyada kale, fiidadka, habeennada iyo fasaxyada waxaa la wici kartaa Heeganka sooshaalka.
Mar walba wac nambarka qeyladhaanta ee 112 haddii ay khatar degdeg ahi jirto.